China Model: YM32CFE-165HZ fekitori uye vagadziri | Yakakwana Ratidza
Chinhu chekutanga chatinofanira kumisa ndechekuti "Chii chaizvo chiri chiyero chekuzorodza?" Neraki haina kuoma. Refresh mwero inongova iyo nhamba yenguva iyo chiratidziro chinozorodza iyo mufananidzo yainoratidza pasekondi. Iwe unogona kunzwisisa izvi nekuzvienzanisa nehuremu hwehuwandu mumafirimu kana mitambo. Kana iyo bhaisikopo ikapfurwa pamafuremu makumi maviri nemana pasekondi (sezvazviri mureza wemu cinema), izvo zvirimo zvinyorwa zvinongoratidzira mifananidzo makumi maviri nesere pasekondi Saizvozvo, chiratidziro chine chiyero chekuratidzira che60Hz inoratidza 60 "mafuremu" pasekondi. Haasi mafuremu chaiwo, nekuti iwo maratidziro anozorodza ka60 sekondi yega yega kunyangwe isina kana pixel imwe chete inochinja, uye chiratidziro chinongoratidzira sosi yakapihwa iyo. Nekudaro, iyo fananidzo ichiri nzira iri nyore yekunzwisisa iyo yepfungwa pfungwa kumashure kwezororo zororo. Chiyero chepamusoro chekuzorodza saka zvinoreva kugona kubata yakakwira furemu chiyero. Ingo rangarira, kuti iyo inoratidzira inongoratidzira iyo sosi yakapihwa iyo, uye nekudaro, yakakwira zororo mwero haigone kuvandudza ruzivo rwako kana yako zororo zinga ratove rakakwirira kupfuura iro furemu reyako yako sosi
Kana iwe ukabatanidza yako yekutarisa kuGPU (Graphics Kugadzira Yuniti / Graphics Kadhi) iyo yekutarisisa inoratidza chero iyo iyo GPU inotumira kwairi, pane chero furemu rate iyo yainotumira iyo, pane kana pazasi peiyo yakanyanya furemu chiyero cheiyo yekutarisa. Yekukurumidza furemu mitero inobvumidza chero kufamba kuti kuitwe pachiratidziro zvakanyatsonaka (Fig 1), ine yakaderedzwa yekufamba blur. Izvi zvakakosha kwazvo kana uchiona vhidhiyo inomhanya kana mitambo.
Yese mitambo yemavhidhiyo inoitwa necomputer Hardware, zvisinei yavo chikuva kana girafu. Kunyanya (kunyanya mupuratifomu yePC), mafuremu anosvipwa nekukurumidza sezvaanogona kugadzirwa, nekuti izvi zvinowanzo dudzira kune unotsvedza uye wakanaka mutambo. Pachave nekunonoka kushoma pakati peye yega furemu uye nekudaro kushoma kwekuisa lag.
Dambudziko rinogona kuitika dzimwe nguva nderekuti mafuremu ari kupihwa nekukurumidza kupfuura mwero unozorodza iwo kuratidzwa. Kana iwe uine 60Hz kuratidza, iri kushandiswa kutamba mutambo uchipa makumi manomwe neshanu pasekondi, unogona kusangana nechinhu chinonzi "screen kubvarura". Izvi zvinoitika nekuti iyo kuratidzwa, iyo inogamuchira kuiswa kubva kuGPU panguva yakati rebei, ingangodaro inobata Hardware pakati pemafuremu. Mhedzisiro yeiyi kubvarura skrini uye kuomarara, kufamba zvisina kuenzana. Mazhinji mitambo inokutendera iwe kuvhara yako furemu rate, asi izvi zvinoreva kuti hausi kushandisa PC yako kugona kwayo kuzere. Nei uchishandisa mari yakawandisa pazvinhu zvazvino uye zvakakurisa seGPUs nemaCPU, RAM uye SSD dhiraivha kana uchizobata kugona kwavo?
Ndeipi mhinduro kune izvi, unogona kushamisika? Chiyero chepamusoro chekuzorodza. Izvi zvinoreva kuti kutenga 100Hz, 144Hz kana 165Hz komputa yekutarisa. Kusimudzira kubva 60Hz kusvika 100Hz, 144Hz kana 165Hz musiyano unooneka. Icho chinhu icho iwe chaunofanirwa kungozvionera wega, uye iwe haugone kuzviita nekutarisa vhidhiyo yacho pachiratidziro che60Hz.
Adaptive zororo reti, zvisinei, ihwo nyowani yekucheka-kumucheto tekinoroji iyo iri kuramba ichiwedzera kuve inozivikanwa. NVIDIA inodaidza iyi G-SYNC, nepo AMD ichidaidza kuti FreeSync, asi pfungwa yepakati yakafanana. Chiratidziro chine G-SYNC ichabvunza iyo kadhi yemifananidzo kuti inokurumidza sei kuendesa mafuremu, uye inogadzirisa mwero wekuzorodza zvinoenderana. Izvi zvinobvisa kubvarura skrini pane chero furemu rate kusvika kune yakanyanya mwero yekuzorodza yemonitor. G-SYNC hunyanzvi hwekuti NVIDIA inobhadharisa muripo wepamusoro wekupa marezinesi uye inogona kuwedzera mazana emadhora pamutengo wecomputer. FreeSync kune rimwe divi yakavhurika sosi tekinoroji yakapihwa ne AMD, uye inongowedzera chidiki pamutengo wecomputer. Isu Yakakwana Ratidza kuisa FreeSync pane edu ese emitambo monitors seyakajairwa.
Kazhinji kutaura, Freesync inonyanya kukosha pakutamba, kwete chete kwekudzivirira kubvarura asi yekusimbisa chiitiko chakatsetseka. Izvi zvinonyanya kuitika kana iwe uchimhanya yemitambo Hardware iri kuburitsa mamwe mafuremu kupfuura ayo ako ekuratidzira anogona kubata.
G-Sync uye FreeSync mhinduro kune ese ari maviri nyaya nekuita kuti zororo riratidzike panguva imwechete se mafuremu anopihwa nekadhi kadhigiramu, zvichikonzera mutambo wakasununguka, usina misodzi.
Yakakwirira-inesimba renji (HDR) inoratidzira inogadzira yakadzama misiyano nekuburitsa yakakwira ine simba renji yekuvhenekera. Iyo HDR yekutarisa inogona kuita kuti zviratidzike zvioneke zvakajeka uye zvinunure zvakapfuma mimvuri. Kusimudzira PC yako neiyo HDR yekutarisa kwakakosha kana iwe uchitamba mitambo yemavhidhiyo neepamusoro-mhando magiraidhi kana tarisa mavhidhiyo mune HD resolution.
Pasina kunyura zvakadzama mune yehunyanzvi ruzivo, iyo HDR inoratidzira inogadzira yakakura kuvhenekera uye kudzika kwemavara kupfuura masikirini akavakirwa kusangana neyakare zviyero.
Kukurumidza Kupindura Nguva inoderedza kufema & kupenya apo uchichinja mapikisheni, uchigara uchichengeta muvengi nenzvimbo zvakaringana mukutarisa munguva dzekusangana.
Iyo VA (Vertical Alignment) pani inoita mucherechedzo wayo nekuendesa epamberi zororo zereti, inopinza kusiyanisa ratios, uye stellar ekuona angles. Zvese izvi zvinhu zvinoita kuti ipaneru iyi ive yakanaka yekutamba uye nehunyanzvi kutsvaga.
VESA Wall Inokwidzwa
Iyo VESA yemadziro gomo pateni inokupa iwe rusununguko rwekusarudza yakanakisa yekumira nzvimbo yekutarisa yako, kubvisa tambo yemagetsi, uye chengetedza yakakosha nzvimbo kune yako yekutamba uye yebasa chiteshi.
Pashure: Muenzaniso: YM320QE (G) -165Hz
Zvadaro: CCTV yekutarisa-PA220WE
CCTV yekutarisa PM240WE
4K simbi Series-UHDM433WE
CCTV yekutarisa PM270WE
CCTV yekutarisa PX270WE
CCTV yekutarisa PA240WE
4K simbi Series UHDM553WE